दार्जिलिङका गोर्खाहरू भन्छन्- आइ नो नेपाली न्यु इयर (भिडियो रोड शो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दार्जिलिङका गोर्खाहरू भन्छन्- आइ नो नेपाली न्यु इयर (भिडियो रोड शो)
दार्जिलिङ । नेपालीभाषी बाहुल्य दार्जिलिङले नेपालको बारेमा कति जानकारी राख्दछ त? अर्थात यहाँका गोर्खेलाई नेपालबारे कति कुराहरू थाहा छ होला? त्यसमाथि नेपाली नयाँ वर्षको दिन आज यहाँ के के हुन्छ होला? यहाँका नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई नेपालको नयाँ वर्ष थाहा त छ?
यस्तै जिज्ञासा लिएर हामी रोड शो मा निस्कियौं। नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएकोले स्वाभाविक शुभकामना साटासाट त भयो नै, तर भेटेका मध्ये कतिले नेपाली नयाँ वर्ष थाहा भएको सुनाए, कतिले त के आज थाइल्याण्डको नयाँ वर्ष हो? भनेर सोधे। अमेरिकाको नयाँ वर्ष हो आज? भनेर पनि सोधे।
भेटेका मध्ये केहीले नयाँ वर्ष मनाउने बताए। कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले सोध्यौँ। उत्तर आयो- 'कुखुरा काट्ने, ड्रिंक्स गर्ने मनाउने त हो, हामी नेपालीको सेलिब्रेसन यस्तै त हो।'
दार्जिलिङमा ४ दिनपछि आउँदो अप्रिल १८ तारिखमा लोकसभा चुनावको मतदान हुँदैछ। यही सन्दर्भमा चुनावी माहोल बुझ्न डिसी नेपाल टिम यतिबेला दार्जिलिङमा छ।
नेपाली नयाँ वर्ष बारे यहाँका गोर्खालीहरूसँग हामीले सडक संवाद गर्यौं र शुभकामना साटासाट गर्यौं। त्यही क्षणका रोचक दृश्यहरू हामीले क्यामेरामा उतारेका छौ।
हेर्नुस् दार्जिलिङमा नेपाली नयाँ वर्ष बारे गरिएको डिसी नेपाल रोड शोः